Bonke labo abangasukumi bafakaze bangabanduleli bezimpumputhe, amakhosi okungazi futhi bayoba ngabangazi kuze kube phakade, iziwula zaphakade nabafile abayizimpumputhe zaphakade. Ngakho imimoya yethu kufanele ivuke! Bonke abantu kufanele basukume! Halalisani, dumisani futhi nibabaze ningaqedi iNkosi yenkazimulo, uYise womusa, iNdodana yokuhlenga, imimoya eyisikhombisa enenala, noNkulunkulu uSomandla oletha umlilo wobukhosi oqothulayo nokwahlulela okulungileyo, owanele konke, onenala, onamandla onke, futho ophelele. Isihlalo Sakhe sobukhosi siyophakanyiswa kuze kube phakade! Bonke abantu kufanele babone ukuthi lokhu kuwukuhlakanipha kukaNkulunkulu, kuyindlela Yakhe emangalisayo yokusindisa, futhi kungukufezwa kwentando Yakhe ekhazimulayo. Uma singasukumi sifakaze, uma umzuzu usudlulile khona-ke akukho kubuyela emuva. Ukuthi sizuza izibusiso noma ishwa kunqunywa kulesi sigaba samanje sohambo lwethu, ngalokho esikwenzayo, esikucabangayo nesikuphilayo ngalesi sikhathi. Ngakho kufanele nenze kanjani? Fakazani futhi niphakamise uNkulunkulu kuze kube phakade; phakamisani uNkulunkulu uSomandla, uKristu wezinsuku zokugcina—uNkulunkulu waphakade, oyingqayizivele, ongowangempela!
UNkulunkulu uSomandla nguNkulunkulu woMoya abayisikhombisa! Futhi unguNkulunkulu wamehlo ayisikhombisa nezinkanyezi eziyisikhombisa; uvula izimpawu eziyisikhombisa, nomqulu uvulwa Nguye! Useshaye amacilongo ayisikhombisa, futhi izitsha eziyisikhombisa nezinhlupho eziyisikhombisa zisesandleni Sakhe, ukuze akudedele ngokuthanda Kwakhe. O, imidumo eyisikhombisa ebilokhu ivaliwe! Isikhathi sokuyivula sesifikile! Lowo oyovula ukuduma okuyisikhombisa usevele ebonakele phambi kwamehlo ethu!
Bonke abantu kufanele bezwe amacilongo Akhe ayisikhombisa ankenenezayo. Ngaye konke kuyaziwa, kungaphinde kufihlwe, futhi akusekho lusizi. Konke kuyambulwa futhi konke kunqobile!
Bonke abantu bayagubha phambi kwesihlalo sobukhosi, bephakamisa futhi bedumisa uNkulunkulu uSomandla, uKristu wezinsuku zokugcina! Amaphimbo anyakazisa wonke umhlaba njengokuduma kwezulu! Zonke izinto ngokungangabazeki zikhona ngenxa Yakhe, futhi ziphakama ngenxa Yakhe. Ngubani ongalokotha anganikezi yonke inkazimulo, ukuhlonipheka, igunya, ukuhlakanipha, ubungcwele, ukunqoba nezambulo ngokuphelele Kuye? Lokhu kungukufezwa kwentando Yakhe futhi kungukuphethwa kokugcina kokwakhiwa kokuphatha Kwakhe!
Okwedlule: Isahluko 33
Okulandelayo: Isahluko 35